आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कारको आरोप लागेका बराहक्षेत्र चतराधामका धर्मगुरु कृष्णदास गिरी सिद्धबाबालाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। शुक्रबार जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई थप सात दिन हिसातमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।पहिलोपटक सोमबार उनलाई चार दिन हिसातमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। सो अवधिमा अनुसन्धान पूरा नभएपछि अदालतले दोस्रोपटक सात दिनको म्याद दिएको हो । सुनसरी बाहिरकी एक अनुयायीले कात्तिक ४ गते आफूलाई बराहक्षेत्रस्थित चतरा आश्रममा बलात्कार गरेको उजुरी गत बिहीबार दर्ता गराएपछि प्रहरीले सिद्धबाबालाई विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होमको आईसीयू बाट सोमबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - भीआईपी यौनकाण्डले चर्चा पाइरहेका बेला यस्तै खाले घटनाले अहिले फेरि सुनसरीलाई तताएको छ । संघीय प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सौरभशमशेर जबरालाई ‘बात’ लागेपछि सुनसरी नै तातिन पुगेको हो । उनले एक महिलाको घरबार त बिगारे नै त्यस अतिरिक्त उनलाई मार्नेसम्मको धम्की दिएपछि ती महिला गृहमन्त्रालय पुगी हारगुहार गरिरहेकी छिन् । गृहमन्त्रालयमा एसएसपी राणाको विषयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । ती महिलाको उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो । आफ्नो घरबार बिगारेको र मार्ने धम्की दिएको भन्दै महिलाले राणाविरुद्ध गत २७ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । यस्तै उनीमाथि एक महिला प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गर्दै आएकोसमेत उजुरीमा उल्लेख छ ।
यस्ता घटना सार्वजनिक गरे मारिदिने धम्की दिएको ती महिलाको उजुरीमा उल्लेख छ । गृहमा उजुरी र प्रधान कार्यालयको पत्रपछि राणा तनाबमा छन् । उनी हाल खराब संगतमा परेको भेटिएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छानबिनका क्रममा एसएसपी राणा कार्यालयमा भन्दा पनि पार्टीप्यालेसहरुमा सुनसरीका खराब मान्छेको संगतमा रमाइरहेको भेटिने गरेका छन् । एसएसपी राणा भने कसैले पनि आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्ने जानकारी नभएको बताइरहेका छन् ।
यसगरी - सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा बस्ने सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरी बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । उनले आफ्नै २७ वर्षीया अनुयायी महिलामाथि कात्तिक ४ गते आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेकाे आरोप छ । पीडित अनुयायी महिलाले दिएको निवेदनमा सिद्धबाबाले उनलाई यस्तो अनुचित व्यवहार गर्ने छन् भन्ने कल्पनासम्म पनि नगरेको बताइएको छ ।
प्रहरीले उजुरी लिएपछि नेपालमा भीआईपीहरु यौन दुराचारको आरोपमा जेल पर्ने क्रममा अर्का भीआइपी सिद्धबाबा पनि तानिन पुगेका हुन् । भीआइपीलाई विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होम आइसीयूमा भर्ना भएको अवस्थामा नै सोमबार बिहान आज ४ बजे सुनसरीका डीएसपी विनोद शर्माको टोलीले सिद्धबाबालाई पक्राउ गरेको हो।
हाल यस्तै घटना सिद्धबाबासँग जोडिन आएको छ । पीडित भनिएकी महिलाले दिएको उजुरी सुनसरी प्रहरीले नै बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उनी काठमाडौं आएर महनगरीय प्रहरी परिसरमा निवेदन दिन गएकी थिइन् । तर महानगरीय प्रहरीले यो कार्यक्षेत्रका हिसाबले सुनसरीको रहेको बताएपछि उनी केन्द्रीय अनुसनधान व्युरो (सीआईबी) कहाँ पुगेकी थिइन् ।
सीआईबीले निवेदन बुझेर महिलाको शारीरिक परीक्षणसहित उजुरी सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएपछि भीआईपी सिद्धबाबा बिराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होमको दोस्रो तल्लाको कोठा नंं. ५मा मुटुको रोगीका रुपमा बसिरहेका छन् । उनलाई सरकारले विशेष सुरक्षा गार्ड पनि प्रदान गरेको छ ।
भीआईपी सिद्धबाबामाथि लागेको आरोप, त्यसबाट बच्नका लागि उनले अपनाएका उपायहरु अर्का भीआईपी तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको आरोप र उनी विरामीका रुपमा नर्भिक अस्पतालमा बसेको क्रियाकलापसँग मेल खान पुगेको छ ।
अर्को समानता भनेको महरा र रोशनी शाहीबीच भएको च्याट र सिद्धबाबा तथा उनकी अनुयायीबीच भएको च्याट तथा म्यासेज समान प्रकृतिका छन् । सिद्धबाबाविरुद्ध बलात्कारको निवेदन दिएकी सलिना रामदासी नाम गरेकी महिलाले बाबालाई पठाएको म्यासेजमा सिद्धबाबा कृष्णदासलाई भेट्ने, चुम्बन गर्ने र अंकमाल गर्ने इच्छा व्यक्त गरिएको छ । ‘एकान्तमा भेट्ने’ भनी इच्छा जाहेर गर्दैगर्दा उनले ‘अरुसँग बोलाएरै भेटिन्छ, मैले यति बिन्ती गर्दा नि यतिका वेवास्ता’ भन्दै ‘अब समय सकियो, जम्मा ४४ दिन छ, कसरी पूर्ण बनाउने हजुरको हातमा छ’ सम्म लेख्न भ्याएकी छिन् ।
सिद्धबाबालाई गरिएको म्यासेजमा ती पीडित भनिएकी अनुयायीले यतिसम्म पनि लेख्न भ्याएकी छिन् कि ‘बुढाले छुँदा पीडा हुन्छ, उहाँपनि पराइ भइसक्नुभो । म जत्तिको पराई कोही छैन .. मलाई, म घृणाको लायक छु, अझै घृणा गरिस्यो, यति घृणा गर्नुहोस् कि मेरो छाती छियाछिया होस् ।’ उनले मजदुरी गर्ने श्रीमान र साना छोराछोरीलाई छाडेर आफू भक्त भएपनि दीक्षा दिन नमानेको गुनासोसमेत म्यासेजमा गरेकी छिन् ।
यो प्रसँगले उक्त भीआईपी यौनकाण्ड साँचो हो कि नियोजित भन्नेमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । तथापि, यी विषयहरुमा अदालतबाट फैसला हुन बाँकी छ ।
बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ । आरोपित व्यक्तिको दबाबका आधारमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको हो । सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा बस्ने सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीमाथि बलात्कारको आरोप छ । आफ्नै अनुयायी महिलामाथि गत ४ कात्तिकमा बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ । पीडितले प्रहरीमा जाहेरीसमेत दिइसकेकी छिन् । तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर आरोपीलाई पक्राउ नगर्दा पीडितमाथि उजुरी फिर्ता लिन दबाब बढेको छ ।
आफूलाई भेट्न बोलाएर चतरास्थित आश्रममै बलात्कार गरेको पीडित महिलाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रहरीले अझै जाहेरी दर्ता गरेको छैन । सिद्धबाबाकै प्रभावमा परेर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको पीडितको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘काठमाडौंबाट त्यससम्बन्धी बुधबार जाहेरी आएको छ,’ एसपी पोखरेलले भने, ‘घटना भएको हो/होइन, हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ ।’
बुधबार नै त्यससम्बन्धी जाहेरी आए पनि प्रहरीले न जाहेरी दर्ता गरेको छ न त आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानमै चासो दिएको छ । जसका कारण आरोपीले पीडितमाथि प्रभाव तथा दबाब दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म प्रहरीले सिद्धबाबामाथि सोधपुछसमेत गरेको छैन । उनी आश्रममै छन् ।
स्रोतका अनुसार पीडित महिला केही दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेकी थिइन् । सुनसरीको घटना भन्दै काठमाडौं प्रहरीले उजुरी नलिएपछि उनीहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) गएका थिए । सिआइबीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाहेरी सुनसरी पठाएको हो । मंगलबार नै सिआइबीले सुनसरीमा जाहेरी पठाए पनि सुनसरी प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिएको हो । सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान गरी त्यसबारे जानकारी दिनसमेत सुनसरी प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । सिद्धबाबा यसअघि पोखरामा नौ दिनसम्म समाधि बसेको भनेर चर्चामा आएका थिए । उनीमाथि दुईवटा नागरिकतालगायतका विवादका विषयमा प्रशासनमा उजुरी छन् ।
महिलासम्बन्धी अपराधका घटनामा लापरबाहीका कारण प्रहरी पटक–पटक बदनाम भइसकेको छ । तर, पनि प्रहरी कार्यशैली सुध्रिएको छैन । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गर्दा प्रहरीले विश्वास गुमायो । सुरुमा हराएकी निर्मलालाई खोज्न प्रहरीले चासो दिएन भने पछि शव भेटिएपछि प्रमाणको सुरक्षामा लापरबाही भएको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा समेत प्रहरीले सुरुमा घटना लुकाउन खोजेको थियो । बलात्कार प्रयास भयो भनेर महिलाले उजुरी गर्दा घटनास्थल पुगेको प्रहरी मुचुल्का नै नगरी फर्किएको थियो । पछि दबाब सिर्जना भएपछि भोलिपल्ट दिउँसो मात्र प्रहरी मुचुल्काका लागि घटनास्थल पुगेको थियो । जसकारण महराको मुद्दामा फिंगर प्रिन्टलगायत प्रमाण प्रहरीले संकलन गर्न सकेन । अझै पनि सकेसम्म कतिपय घटना लुकाउने खोज्ने प्रवृत्ति सुनसरी घटनाले समेत देखाएको छ ।
आफूले आफैंलाई सिद्धबाबा स्वघोषित गर्ने श्री १००८ श्री डा. बैष्णव कृष्णदासजी महाराजको वास्तविक नाम कृष्णबहादुर गिरी हो । सोलुको जुबुमा जन्मिएका कृष्णबहादुर गिरी उर्फ कृष्णदास जी महाराजका मातापिता, दुई भाई र दुई बहिनी छन् । उनका दुई आमा छन् । उनी कान्छीतिरका जेठा छोरा हुन् । नाम परिवर्तन गर्नमा खप्पीस यी बाबा पोखरा पुगेर सिद्धबाबाको नामले चर्चा बटुलेका व्यक्ति हुन् । उनले यसअघि पनि सुनसरी जिल्लाको चतरामा ९ दिने कथित समाधि बसेर भक्तहरूलाई आकर्षित गरेका थिए ।
कृष्णदास सिद्ध पुरुष हुन् त ?
नौ दिन अर्थात २ सय १६ घण्टा बिनाअक्सिजन बाँचेका भनिएका सिद्धबाबाको यो चमत्कारिक कुरा सुन्दा उनको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो । एउटा मान्छे कतिबेला सिद्धपुरुष कहलिन्छ ? सिद्ध हुनुको अर्थ के हो ? सिद्धताको विशेषता के हो ? यो प्रश्नले मेरो मन मस्तिष्कमा खुल्दुली पैदा ग¥यो । यही खुल्दुलीलाई साम्य पार्नका लागि मैले पल्टाउन पुगे धार्मिक ग्रन्थको पवित्र पुस्तक ‘गीता’ ।
भागवत गीताको अध्याय २ को ५६ श्लोकअनुसार “जुन मान्छेका लागि सुख र दुःख समान अवस्था हो, सुख प्राप्तिको जसको स्पर्श हटिसकेको छ, जुन भय र क्रोधबाट मुक्त हुन्छ र जो स्थिर बुद्धीवाला हो ऊ नै सिद्ध पुरुष हो ।”
भागवत गीताले भनेजस्तै के ती व्यक्तिसँग सिद्धपुरुषको गुण छ त ? सुविधाजनक गाडी चढ्ने, नाम र दामका लागि भ्रमित कपटपूर्ण कथित चमत्कारको नौटङ्की रच्ने यी बाबा कसरी सिद्धपुरुष भए ? आफंैले आफंैलाई स्वघोषित सिद्ध प्रमाणित गर्दैमा कोही सिद्ध कहलिन्छ भने सिद्ध हुनकै लागि काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह सबै कुरा त्याग्नेहरूप्रति कत्तिको न्याय होला ? अनि आफ्ना गैरकानुनी जञ्जालबाट मुक्त हुनका लागि रचिएको यो नौटङ्कीपनले के उनलाई सिद्धपुरुष साबित गर्न मद्धत पुग्छ ?
काण्डै काण्डमा सिद्धबाबा
सिद्धबाबाको नामले यतिबेला हाइ हाइ कमाइरहेका कृष्णबहादुर गिरी उर्फ कृष्णदास महाराज दोहोरो नागरिकताको काण्डमा संगीन आरोप खेपिरहेका छन् । उनले सोलुखुम्बुबाट कृष्णबहादुर गिरीको नामबाट नागरिकता लिएका छन् भने सुनसरीबाट वैष्णव कृष्णदासको नामबाट नागरिकता लिएका छन् ।
सोलुखुम्बुबाट ठेगाना जुबुु १ सोलु र जन्म मिति २०३० साल मंसिर १० गते लेखिएको २२२७।५९५ नम्बरको नागरिकता लिएका छन् भने २०६५ साल पुस १७ गते सनुसरीबाट श्री बैश्णव कृष्णदासका नाममा जन्म ठेगाना जुबु सोलु, स्थायी बसोबास बराह क्षेत्र–१ सुनसरी, जन्म मिति २०३१ साल फागुन १९ गते लेखिएको ०६९००४।१३२८०८ नम्बरको नागरिकता लिएका छन् । दुबै नागरिकतामा जन्मस्थान जुबु सोलु र बुबाको नाम भने छबिलाल गिरी नै लेखिएको छ । नाम र जन्म मिति भने फरक–फरक छ ।
नागरिकता त एउटा विषय मात्रै हो, जसमा नेपाल सरकारले कदम चालेको क्षणभरमै कृष्णदासलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्छ । योसँगै उनले नेपाल–भारतमा जडिबुटीको अबैध कारोबार गरेर गैरकानूनी कार्यमा संलग्न रहेको पोल समेत खुल्न थालेको छ ।
सबैभन्दा नजिक मानिने आफ्नै भाईलाई आर्थिक रुपमा नोक्सान गर्ने स्वघोषित सिद्धबाबाको यो कदम पनि कम्ती लाजमर्दो छैन । कृष्णदासले सगोलमा सुनसरीमा रहँदाको जमिन आफूले मासेपछि भाइलाई सो बापत पैसा दिन्छु भनी २०७१ पुस ११ गते पाउने गरी मेघा बैंकको पाँच लाखको चेक काटेका थिए । मेघा बैंकको खाता नम्बर ००१००५०२०९०१४ र चेक नम्बर २०४३७७७५ चेक भाईलाई थमाइदिएका थिए । तर चेक लिएर जाँदा सो चेकको खातामा पैसा नभएको र दिइएको चेकको ठेली नै हराएको भनी खातावालाले चेक रद्ध गर्नु भनी बैंकमा निवेदन दिएपछि भाइले आफू आफ्नै दाईबाट ठगिएको पत्तो पाए ।
पटक–पटक आर्थिक रुपमा आफ्नै दाइबाट ठगिएपछि भाइले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा ‘चेक अनादर मुद्धा’ हाले जुन मुद्धा यतिबेला पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यो मुद्धा फौजदारी मुद्धा हो । यसको अर्थ लुटपाट, कुटपिट गरेजस्तै अपराधसम्बन्धी मुद्धा हो यो ।
नेपालको कानूनमा फौजदारी मुद्धा लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा रहन पाउने अधिकार छैन । तर हिन्दू धर्मको महाराज, सिद्ध बाबा वा यस्तै–यस्तै पगरी गुथेर कृष्णदासले राज्यकै आँखामा छारो हाली एक प्रहरी हवल्दारबाट सुरक्षा समेत पाइरहेका छन् । जुन कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा लज्जास्पद विषय हो । बलात्कार, ५ लाख ठगि, दोहोरो नागरिकता, असुली जस्ता जघन्य र संगीन आरोप लाग्दा पनि नेपाल प्रहरीका दशै इन्द्रिय किन एकैपल्ट निदाउछन् ?? कि स्वयं बाबा उठेर चम्मरले हान्नुपर्ने हो ?
याे पनि पढ्नुहाेस् - भीआईपी यौनकाण्ड : एक कृष्ण जेल जाँदा अर्का कृष्णविरुद्ध बलात्कारको आरोप
तीन ‘भीभीआईपी’हरू डिल्लीबजारकाे खाेरमा
'महरा' काण्डका केही प्रश्न
कृष्णबहादुर महरा जेलमा जाँदा रातभरी निदाईनन् रोशनी
महरा प्रकरण : सामान्य नागरिक सरह छानविन हुनुपर्ने थापाको मागसभामुखले आजै दिउँसो २ बजे राजिनामा दिने